Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Ny Mpanjaka Andrianjaka dia maty » Page 2
zulu king zwelithini sary ingonyamatrust org
Teraka tamin'ny 14 Jolay 1948, i Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu dia mpanjaka nanjakan'ny firenena Zulu tamin'ny fehezan-dalàna nentim-paharazana nentim-paharazana tao amin'ny lalàm-panorenan'ny repoblikan'i Afrika Atsimo.
Ny rainy, Mpanjaka Sipra Bhekuzulu kaSolomon, dia mpanjaka talohany ary maty tamin'ny 1968.
Taorian'ny fanambadiany voalohany, Zwelithini, 21 taona lasa, dia lasa mpanjaka fahavalo an'ny Zulus tamin'ny lanonana nentim-paharazana tao Nongoma tamin'ny 3 desambra 1971, natrehin'olona 20,000.
Nanohitra ny ampahany tamin'ny lalàm-panorenana vaovao natolotry ny Kongresy Nasionaly Afrikanina momba ny fitantanana anatiny an'i KwaZulu-Natal ny Antoko Fahalalahana Inkatha nofehezin'i Zulu. Manokana, ny IFP dia nanao fampielezan-kevitra tamin'ny fomba mahery vaika ho an'ny mpanjaka zom-pirenena mahaleo tena sy manana fiandrianana ho filoham-pirenena.
Ho fanoherana ny lalàm-panorenana vaovao, i Inkatha dia tsy nanoratra ny antokony ho amin'ny fifidianana 1994 tamin'ny tanjona hampiatoana ny fifidianana. Rehefa hita fa hitohy ny fifidianana, dia voasoratra ara-panjakana ny antoko. Naneho ny tanjany ara-politika izy tamin'ny alàlan'ny fakana ny ankamaroan'ny vato azon'ny faritany ho an'i KwaZulu-Natal.
Ny tombotsoan'ny firenena Zulu dia miankina amin'ny fitokisan'ny mpanjaka
Ny Mpanjaka dia filohan'ny Ingonyama Trust, orinasam-pandraharahana natsangana hitantana ny tany fananan'ny mpanjaka nentin-drazana ho fanasoavana, fiahiana ara-materialy ary fiadanam-po an'ny firenena zoloa. Ity tany ity dia misy 32 isan-jaton'ny faritr'i KwaZulu-Natal.
Ny volan'ny Mpanjaka dia fehezin'ny manampahefana faritanin'iKwaZulu-Natal. Na dia manao ny andraikitry ny mpanjaka amin'ny ankapobeny aza ny lalàm-panorenana, dia heverina fa hanao araka ny torohevitra ofisialin'ny praiministra, ary indraindray ny filoha afrikanina tatsimo.
Ny mpanjaka dia mitahiry ny lovantsofina sy ny fomba amam-panao zoloa. Nomena voninahitra izy tamin'ny famelomana indray ireo fombafomba ara-kolontsaina toa ny Umhlanga, lanonana dihy volotara tandindona izay mampiroborobo ny fahatsiarovan-tena momba ny fitondran-tena sy ny fanabeazana SIDA eo amin'ny vehivavy Zulu, ary ny Ukweshwama, lanonana nentim-paharazana amin'ireo voankazo voalohany izay misy fombafomba toy ny famonoana omby. Nandehandeha be izy tamin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany sy ny varotra any Andrefana ho an'i KwaZulu-Natal, ary ny fanangonam-bola ho an'ireo fikambanana mpanao asa soa tohanan'ny Zulu, matetika miaraka amin'ny iray amin'ireo mpanjakavaviny.
Ny vady aman-janany
Tao anatin'ny 45 taona lasa, Mpanjaka Goodwill Zwelithini dia nanambady vehivavy farafahakeliny dimy ary niteraka zaza 28 farafaharatsiny, araka ny tatitra tamin'ny 2014 ENCA.
Nanambady ny Mpanjakavavy Sibongile Dlamini vadiny voalohany izy tamin'ny 1969, roa taona talohan'ny naha mpanjaka azy. Manan-janaka dimy izy ireo.
Tamin'ny 1974 dia nanambady an'i Queen Buthle MaMathe, vadiny faharoa izy. Manan-janaka valo izy ireo.
Ny mpanjakavavy Mantfombi Dlamini, vadintany laharana faha-3, dia rahavavin'i Swaziland's King Mswati III. Nanambady izy ireo tamin'ny 1977 ary manan-janaka valo. Ny zanakalahin'izy ireo, Prince Misuzulu, dia heverina ho mpifaninana handimby ny mpanjaka.
Nanambady tamin'ny vadiny No. 4, Queen Thandekile Ndlovu izy tamin'ny 1988. Manan-janaka telo izy ireo.
Vady No. 5 dia ny Mpanjakavavy Nompumelelo Mchiza. Manan-janaka telo izy ireo.
Zola Zelusiwe kaMafu, vadin'ny mpanjaka, dia 17 taona fony izy voafidy ho vadin'ny mpanjaka. Tamin'ny 2005, niteraka an'i Prince Nhlendla izy, nitatitra ny ENCA tamin'ny 2014.
Nilaza izy fa diso ny fandikana azy talohan'ny fanamarihana nataon'ny xenophobia
Tamin'ny volana Janoary 2012, raha niresaka tamin'ny hetsika fankalazana ny faha-133 taonan'ny Ady Isandlwana ny mpanjaka dia nanao fanambarana mampiady hevitra momba ny firaisan'ny samy lahy na samy vavy, ary nilaza fa “lo” izy ireo. Ny komisiona afrikanina tatsimo sy ny vondrona LGBT ary ny filoha Jacob Zuma dia nanameloka izany.
Natao ara-dalàna tany Afrika Atsimo ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy hatramin'ny 2006.
Taty aoriana dia niodina ny mpanjaka ary nilaza fa diso mandika teny izy ary tsy nanameloka ny firaisan'ny samy lahy na samy vavy. Ny zavatra notoheriny dia ny fahalotoan'ny fitondran-tena any Afrika Atsimo izay nambarany fa nanjary fanararaotana ara-nofo niely, anisan'izany ny fanararaotana ara-nofo lahy sy vavy.
Niatrika fanakianana sy fandinihana ny mpanjaka noho ny fomba fiainany lafo vidy ny mpanjaka.
Ny vehivavy tsirairay dia samy manana ny tranony misy mpanjaka ary ny mpandoa hetra dia mihoatra ny 63 tapitrisa rand (5.2 tapitrisa dolara amerikana) isan-taona mba hitazomana ny ankohonan'ny mpanjaka.
Tamin'ny volana septambra 2012, ny Mpanjaka Goodwill Zwelithini dia nangataka tamin'ny governemanta KwaZulu-Natal vola 18 tapitrisa (1.48 tapitrisa dolara amerikana) hananganana fananana vaovao ao anatin'izany ny lapan'ny mpanjaka 6 tapitrisa vaovao ho an'ny vadiny faralahy, Queen Mafu, ary ny fanavaozana ny lapan'ny Mpanjakavavy MaMchiza. Ny CFO ao amin'ny departemantan'ny mpanjaka ao amin'ny Mpanjaka, Mduduzi Mthembu, dia nilaza tamin'ny komity parlemantera fa ilaina ny vola. Nangataka $ 1.4 tapitrisa dolara koa ny departemanta ho fanatsarana ny lapan'ny Mpanjakavavy MaMchiza. Ny governemanta dia efa nandany tety amin'ny $ 6.9 tapitrisa $ ho an'ny fianakavian'ny mpanjaka nandritra ny taona 2012. Tamin'ny taona 2008, ny antoko mpanohitra dia nitsikera ny vadin'ny Mpanjaka Zwelithini tamin'ny fandaniany $ 24,000 tamin'ny lamba rongony, akanjo ho an'ny mpamorona ary fialantsasatra lafo vidy.
Niresaka tamin'ny fivorian'ny vondrom-piarahamonina Pongolo tamin'ny volana martsa 2015, nanaiky i Zwelithini fa nanampy tamin'ny famotsorana an'i Afrika Atsimo ny firenena hafa, saingy tsy fialan-tsiny ho an'ny vahiny izany mba hifaninana amin'ireo mponina ao an-toerana raha tsy ampy ny enti-manana.
"Ny ankamaroan'ny mpitondra governemanta dia tsy te-hiteny momba izany satria matahotra ny ho very vato izy ireo," hoy izy, araka ny tatitry ny NehandaRadio. “Amin'ny maha-mpanjakan'ny firenena zoloa ahy dia tsy zakako ny toe-javatra iray izay itarihan'ny mpitondra antsika ary tsy misy fijeriny. Miangavy ireo izay avy any ivelany izahay mba hiverina any amin'ny fireneny. ”
Ny fanehoan-keviny dia nifanojo tamin'ny fitomboan'ny fankahalana teo amin'ireo Afrikana Tatsimo sy ireo tsy Afrikana Tatsimo. Nipoaka ny herisetra tany Soweto tamin'ny Janoary. Ny antoko mpanohitra Demokratika Alliance dia niantso ny fialàn'ny besinimaro sy ny fialantsiny, ary nilaza fa tsy tompon'andraikitra ireo fanamarihana ireo.
Taty aoriana dia nilaza ny mpanjaka fa ireo mpanatrika tsy ara-dalàna ao Afrika Atsimo fotsiny no tiany horesahina.
Ny mpanjaka lozisialy Goodwill Zwelithini no farany tamin'ny andiana mpanjaka lisitry ny mpanjaka izay nahitana an'i Shaka, izay niaina tamin'ny 1787 hatramin'ny 1828. Araka ny angano Locki - natolotry ny lovantsofina am-bava - i Mnguni no mpanorina ny firenena Nguni any Afrika atsimo. Voalaza fa avy tany avaratra atsinanana tokony ho 1000 taona lasa izy. Ny razany dia heverina fa vondrona mpifindrafindra monina mifangaro Egypte sy fotsy. Ny fototarazon'ny Zulus maoderina dia hita fa manana fitoviana mitovy amin'ny fototarazo jiosy.
Nitatitra tao amin'ny laharana 2011 momba ny PLoS Genetics, hitan'ny mpikaroka fa ny Jiosy amin'ny andro ankehitriny dia afaka manome ny 3-ka-5 isan-jaton'ny razamben'izy ireo amin'ireo Afrikana atsimon'i Sahara, ary ny fifanakalozana fototarazo teo amin'ny Jiosy sy ny Afrikana ambanin'ny Sahara dia nitranga tokony ho 2,000. taona - taranaka 72 - lasa izay, Forward.com tatitra. Ireo dia mifototra amin'ny fanadihadihana manerana ny génome izay manadihady ny tantaran'ny vahoaka jiosy tamin'ny alàlan'ny ADN.
Zulus dia firenena kely ao amin'ny firenena Locki. Ny anaran'i Mnguni dia avy amin'ny teny hoe Locki, anarana ho an'ny foko maro an'isa ao Afrika Atsimo. Anisan'izany i Zulus, Swazis, Ndebeles, ary Xhosas. Mnguni dia noheverina ho mpanjakan'ny firenena mitambatra (talohan'ny zoloa, pre-Xhosa, pre-Swazi, ary pre-Ndebele) Nguni firenena any Afrika Atsimo.